Gareth Bale oo wajahaya xaalad aad u adag kahor kulanka El Clasico – Gool FM
Gareth Bale oo wajahaya xaalad aad u adag kahor kulanka El Clasico
(Real Madrid) 25 Okt 2018. Sida ay baahisay saxaafada gudaha dalka Spain Gareth Bale ayaa heysata dhibaato adag kahor kulanka El Clasico ee Axada soo aadan ay ku wada ciyaari doonaan Barcelona horyaalka La Liga
Wargeyska “El Mundo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in Gareth Bale lagu tuhmayaa inuu lunsaday lacagta canshuur bixinta, waxaana laga doonayaa inuu bixiyo aduun dhan 337 kun oo yuuro, sababa la xiriira inuu qiyaameeyay lacagaha xuquuqda sawiradiisa gaarka ah.
Wargeyska ayaa tilmaamay in Gareth Bale uu lunsaday laaco gaarsiisan 200,000 euros, sanadkii 2013 kadib markii uu kooxda Real Madrid kaga soo biiray dhigeeda Tottenham, sidaas darteedna waxaa lagu ganaaxi doonaa 100 kun euro iyo 37 kun euro ee ah lacagaha faa’iidada.
Gareth Bale ayaa kusoo biiray liiska xidigaha kooxda Real Madrid ee lagu heysto inay lunsadeen lacago canshuur ah, kuwaasoo ay ugu dambeeyeen xidigaha Luka Modric iyo Marcelo.
Karim Benzema ayaa dhawaan isna bixiyay lacago canshuur ah ee ee gaarsiisan nus milyan euro, si uu u xaliyo dhibaatada ka heysata kiiska canshuur lunsiga ah, Sergio Ramos ayaa isna horey u bixiyay qiimo dhan 100 kun euro.
Lopetegui oo cayrin lama filaan ah ka badbaaday kadib kulankii Champions League! (Yaa badbaadiyay?)
Garooonka uu ugu jecel yahay, xaalada adag ay ku sugan tahay Real Madrid iyo dhowr arimood uu ka hadlay Mesut Ozil